Ka qaybqaado Horumarinta Airport ka Buuhoodle
Dal walba oo dunidan ka mid ah waxaa horumariya dadkiisa, waxayna ku horumariyaan waxbarasho dugsi hoose ilaa jaamacad, farsamooyin kala duwan, dhaqaale abuurid, shaqo abuurid iyo maamul wanaag.
Shacabka iska leh Garoonka Diyaaradaha Caalamiga ah ee Ismaaciil Mire waa shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan, waayo bogcada uu ku yaalo waa Soomaaliya. Soomaaliyana Soomaali baa leh.
Gobolaysiga, qabyaalada, federaalka iyo isku dirka shacabka Soomaaliyeed waa dib u dhaca dalka Soomaaliya. Waxaa loo baahan yahay in aynu gacmaha isqabsano walaalowno, wax istarno isu kaalmayno.
Dhawaan waxaa la bilaabayaa in loo diyaariyo diyaaridihii ka soo degi lahaa garoonka. wixii aad hayso talo iyo tusaale walaal ku soo kordhi garoonka iyo sidii loo horumarin lahaa.
OGEYSIIS SHIR MUHIM AH AIRPORT BUHODLE
DUULIMAADKII MUQDISHO-BUHODLE-MUQDISHO OO BILAABMAYA
Buhodle (31-10-2015) Waxaa shacabka Soomaaliyeed la ogeysiinayaa in duulimaadkii Muqdisho-Buuhoodle-Muqdisho oo dhawaan bilaabmayo. Qofkii doonaya in uu raaco diyaaradaas u socota Buuhoodle ama ka baxaysa ha la xiriiro xafiiska tikidhada ee diyaaradaas. Dhawaan ayaan la idiin soo gudbin doonaa.
XAFIISKA AIRPORT KA
SHACABYAHOW DANTIINA ISU KAASHADA !!
ISKAASHATO MA KUFTO
Walaalayaal waxaynu maalin kasta aragnaa dawlado ka shaqaynaya midnimadooda si horumar u gaadhaan nolosha shacabkooduna u wanaagsanaado. Waxaynu kaloo aragnaa dawlado burburay oo shacabkooduna ba’ay oo hoogay.
Haddaba si aynu horumar u gaadhno aynu xoogeena iyo caqligeena midawno isuna kaashano wixii kheyr ah ee danta dadka iyo dalku ku jirto. Sida in aynu wada dhisano garoonka diyaaradaha ee Buuhoodle oo muddo qabyo ahaa.
Walaalaha Soomaaliyeed meel aad joogtaanba nagala qaybqaata dhamaystirka dhismaha Garoonka diyaaradaha ee Buuhoodle oo bixiya wixii aad awoodaan.
Barbarkay ka baxdaa waa bakayle qaleen.
Xafiiska Wararka ee Garoonka
Buhodle (10.04.2014) Waxaa maanta madaxweynaha Khaatumo State of Somalia Maxamed Yusuf Jaamac Indhosheel oo ka soo degay garoonka wuxuuna isla maanta u bixiyey magaca cusub garoonka kaas oo ah Ismail Mire International Airport.
DIYAARADII U HORAYSAY OO KA SOO DEGTAY BUHODLE INTERNATIONAL AIRPORT
Buhodle (10.04.2014) Waxaa maanta farxad noo ah anagoo guddiga dhisida garoonka Buhodle International airport in diyaaradii u horaysay ka soo degtay maanta oo taarkkihdu tahay Khamiis 10/04/2014. waxaa diyaarada la socday Madaxweyne Indhosheel oo ah madaxweynaha Khaatumo State of Somalia, waxaa kaloo madaxweynaha weheliyey Mudane Abdikarim Xasan Jaamac (ina Xasan Gabayre) iyo gabadh reer Khaatumo ah oo ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliyeed.
Ugu horayn waa Ilaahay mahaddii in diyaaradii ugu horaysay ka soo degtay Garoonka Diyaaradaha ee Buuhoodle. Waxaanu kaloo halkan uga mahadcelinaynaa dadkii ka qaybqaatay dhismaha Garoonka. Waxaana idinla socodsiinaynaa in uusan wali dhammaan oo dhismihiisii socdo, waxaana loo baahan yahay in taageeradii aynu u haynay aynu sii labanlaabno.
Halkan hoos ka daawada diyaaradii oo ka soo degtay Garoonka Buhodle International Airport.
WARBIXINTII U DAMBAYSAY EE DHISMAHA GAROONKA
Buhodle (18-3-2014) Waxaa maanta la soo gudbiyey warbixin sawiro wadata ee Dhismaha Garoonka Diyaaradaha ee Buuhoodle, taas oo hawlwadeenada naftoodhureyaasha ay ka soo direen Buuhoodle.
Ishaa macalin ah ee halkan ka daawo sawiradii ugu dambeeyey ee dhismaha Garoonka Diyaaradaha Caalamiga ah ee Buuhoodle.
Waxaanu shacabka Soomaaliyeed dhammaantood ka codsanaynaa in ay taakuleeyaan garoonka, maadaama kharash aad u badan u baahan yahay dhamaystirkiisu, waayo waxaa hadhay dhamaystirka RUNWAY -ga, dhismaha xafiisyada iyo terminaal ka iyo Masjidkii.
Waaxda Xoghaynta iyo Dhaqaalaha
Daawo Qoyska Reer Saleebaan Xaaji Dayib Oo ku wareejiyey Ruglay Gudiga Gacanta Ku haysa Garoonka Diyaaradaha Buuhoodle (Top Vedio)
Garoonka Diyaaradaha Buuhoodle ayaa maraya meel aad u wanaagsan waxaana la filaya inuu dhawaan soo dhamaado kana soo dagaan diyaarado Waxaana lays oran karaa waa hor mar usooo hoyday deegaanka khaatumo reer Buuhoodle ayaa aad ugu mahad celinaya gudiga garoonka diyaaaradaha Buuhoodle iyo sidoo kale qoyska reer saleebaan xaaji dayib oo iyagu gartay inay garoonka ku wareejiyaan ruglaydii lagu dhamayn lahaa.
Source: Horufadhi online
XUSEEN GURXAN ADAN (DHALANDHOOL) OO SOO BOOQDAY GAROONKA BUUHOODLE
Buhodle (01.03.2014) Waxaa maanta booqasho ku tagay ganacsade Xuseen Gurxan Aadan (Dhalandhool) Garoonka Caalamiga ah ee Buuhoodle. Wuxuuna aad ugu farxay shaqada wanaagsan ee ka socota dhismaha garoonka, isagoo qurbajoogta deegaanka u dhalatayna ku dhiirigeliyey in ay ka qaybqaataan.
Wuxuu kaloo Xuseen balanqaaday in uu diyaarada ugu horaysay isagu keenayo ayna Insha Allaah ka soo degi doonto garoonka diyaaradaha ee caalamiga ah ee Buuhoodle.
Halkan hoose ka daawo Somali Channel oo ka warbixinaya arrinkaas.
Sawiradii ugu dambeeyey ee shaqada ka socota Garoonka Buuhoodle
Walaalaha ka qaybqaatay dhismaha Garoonka Diyaaradaha ee Buuhoodle kuwaas oo aanu mahad balaadhan u celinayno, waxaa halkan lagula socodsiinayaa in dhismihii garoonku si habsami ah uu u socdo Insha Allaah uu dhammaan doono dhawaan. Dadka aan wali ka qaybqaadanna waxaanu u soo jeedinaynaa in aysan ka hadhin horumarka dalkooda oo ay ka qaybqaataan dhamaystirka garoonka.
HORUMARKA DALKEENU WAA MUSTAQBALKA WANAAGSAN EE UBADKEENA
XAGEE KU SOO SHUBAA TABARUCAADKA AIRPORT-KA?
Walaalka ama walaasha qaaliga ahow waxaanu kula socodsiinaynaa in aad tabarucaaga ku soo dirto halkan hoose:
Waa adiga magacaaga iyo meesha aad joogto.
DHISMAHA MADAARKA SHAXDA
ACCOUNT NUMBER: 0201-04-52685-05
Faalo: ku dar fariinta ah “FADLAN UGU SHUBA ACCOUNT-KA”
Waa XAWAALADA AMAL EXPRESS LAANTA DUBAI.
Wixii faahfaahin dheeri ah kala xiriira Amina Ahmed tel.+44 7946791511
BARNAAMIJKA DALDHIS EE SOMALI CHANNEL
Waxaa maanta barnaamijka daldhis Somali Channel TV ka qaybqaatay guddiga Dhismaha Garoonka Diyaaradaha ee Buuhoodle. Halkan ka daawo barnaamijka daldhis oo laga hadlayo Garoonka Buuhoodle.
Guddiga Dhismaha Garoonka Buuhoodle
Sidaad ogtihiinba waxaa mudo ba socda dhismaha Garoonka Diyaaradaha ee magaalada Buuhoodle, laakiinse maanta waxaa diyaar u ah cagaftii mudadaas la sugayey in la helo taas oo ah Gredar.
Waxaa kaloo video ga hoose idinkala hadlaya Jaamac Jaawali oo ka mid guddiga Dhismaha Garoonka Diyaaradaha ee Buuhoodle.
Jaaliyada Finland oo taageertay dhismaha Garoonka Buuhoodle
Helsinki (12-2-2014) Abdulkadir Mohamed Abdi (Kopra) oo ku hadlaya magaca Jaaliyada Khaatumo ee Finland ayaa muujiyey sida ay u taageersan yihiin dhamaystirka dhismaha Garoonka Diyaaradaha ee Buuhoodle.
halkan hoose ka daawada maqal iyo muuqaal
OGEYSIIS SHIR MUHIM AH EE GAROONKA BUHODLE
Waxaa dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka soo jeeda deegaanka SSC laga codsanayaa in ay ka soo qaybgalaash shir muhim ah xaga teleconference ka ah oo la qabanayo maalinta sabtida ah ee soo socota taariikhdu tahay 15.02.2014 saacada UK 5pm, Finland 7pm, Toronto 12 noon, Minisota 10am, Ohio 11 am.
Telefoonka iyo access code-ka kala xiriir telefoonada hoos ku qoran:
18572102035 Boston, USA
1-6173961958 Boston, USA
1-7039685332 Virginia, USA
1-6512107734 Minisota, USA
1-4086143196 california, USA
BAAQ DHAMAYSTIRKA GAROONKA BUHODLE
Helsinki (09-02-2014) Xubin ka mid ah guddiga dhismaha Garoonka Diyaaradaha ee Buuhoodle oo la yiraahdo Jaamac Jaawali oo halkan ummadda Soomaaliyeed baaq uga diraya.
Maadaama aynaan lahayn dawlad dhexe oo awood u leh in ay dhisto garoomada diyaaradaha iyo wixii la mid. Waxaad halkan hoos ka daawataan xubinkaas oo baaq idiin soo jeedinaya.
Dhamaystirkii dhismaha garoonka oo si rasmi ah u bilawday
Buhodle (08-02-2014) Waxaa maanta soo gaadhay magaalada Buuhoodle cagafcagafta loo yaqaan Gredar ee lagu dhiso wadooyinka iyo garoomada diyaaradaha. Waxaa soo dhaweeyey shacabka Soomaaliyeed ee degan gobolka Cayn iyo hawlwadeenada dhismaha garoonka diyaaradaha ee Buuhoodle.
Waxaad halkan hoose ka daawataan soo dhawayntii maanta loo sameeyey cagafcagafta Gredar ee Garoonka loo keenay:
Dhamaystirka Garoonka oo dib u bilawday
Buhodle (25/11/2013) Waxaa dhawaan dib loo bilaabay shaqadii dhamaystirka Garoonka Caalamiga ah ee Buuhoodle, iyadoo shacabka gobolka aysan u kala hadhin. Waxaa
mas’uuliyada hawsha dhamaystirka gacanta ku haya guddiga Garoonka ee qurbojoogta ah, iyadoo xubno ka socdaa ay dalkii joogaan. Waxaa kaloo la shaqaynaya 2 xubnood
oo hawl-wadeeno ah kalana ah Foreman iyo Xisaabiye.
Waxaa garoonka hawshiisa ka qaybgalaya injineer ku takhasusay hawlaha dhismaha garoo0nada diyaaradaha, isagoo qiimayn ku sameeyey waxyaalaha loo baahan yahay
in garoonka lagu dhamaystiro. Waxaana ka mid ah qalabka la dalbay ee socda, cagafta loo yaqaan Grinder, iyo cagafta loo yaqaan Roller ta, kuwaas oo kala ah sima iyo garaacdo.
Ogeysiis shir muhim ah ee Garoonka Diyaaradaha ee Buuhoodle
Dhamaan bulsho waynta Soomaaliieed gaar ahaan dadka u dhashay SSC waxaa laga codsanayaa in ay ka soo qaybgalaan shir muhim ah oo looga hadlayo dhamaystirka dhismaha Garoonka Diyaaradaha Caalamiga ah ee Buuhoodle.
Faahfaahinta shirku waa:
Saacada UK ……… 5pm
telefoonka iyo access code-ka kala xiriira guddiga Garoonka ee telefoonadoodu hoos ku qoran yihiin:
1. Amina Ahmed UK 447946791511
2. Kaariye 18572102035
3. Saynab X. Cali 447534700518
4. Jaamac 447577225029
Guddiga Dhismaha Airport ka Buuhoodle
Xilwareejin ka dhacday Garoonka Diyaaradaha ee Buuhoodle
Buhodle (14/10/2013) Waxaa maanta lagu xaflad xilwareejin ah Garoonka Diyaaradaha ee Buuhoodle, iyadoo halkaas ka soo qaybgaleen Golaha Deekaanka ee
Gobolka Cayn, Isimo, Cuqaal, dadweyne kale oo aad badan, qurbojoog iyo waliba guddigii Garoonka ee Qurbaha joogay oo ay ka socdaan Faadumo Jaamac Jengeli iyo
Waxaa halkaas ka hadlay ugu horayn Cumar Abdi Haaruun oo guddigii hore u qaabilsanaa maamulka iyo maareynta garoonka, isagoo caddeeyey in agabkii iyo
mas’uuliyasii Garoonka laga bilaabo maanta in ay ku wareejiyeen guddiga qurbajoogta oo ay wakiil ka yihiin Faadumo Jaamac Jengeli iyo Saado Mohamud. Waxaa
isna goobtii ka hadlay guddoomihii hore ee maamulka Garoonka Xasan Faarax Baad oo isna halkaas ka caddeeyey in ay xilkii ay u hayeen Garoonka ay wareejiyeen
kuna wareejiyeen wakiilada gudigga Garoonka ee Qurbaha si loo dhamaystiro dhismaha Garoonka/
Isku soo wada duuboo waxaa halkan looga bahadcelinyaa guddigii hore oo runtii soo dadaalay intii tamartooda haddana si sharaf leh xilkii isaga wareejiyey. Waana
la xasuusan doonaa dadaalkoodii ahaa dhismaha Garoonka, waxaana iyaga maanta sharaf u ah in ay arkaan shaqadii ay bilaabeen oo dhamaystiran tahay lagana
Xafiiska Warbaahinta ee Garoonka
KA QAYBGAL WARBIXINTA GAROONKA BUUHOODLE EE BERI 20/01/2013 AXAD AH
Guddiga dhismaha Garoonka Diyaaradaha ee Buuhoodle waxay ogeysiinayaan dadweynaha Soomaaliyeed ee jecel horumarinta dalkooda gaar ahaan dadka ka soo jeedaa deegaanka SSC (Khaatumo State of Somalia) in ay ka soo qaybgalaan shir muhim ah oo lagaga hadli doono waxqabadkii guddiga iyo meesha ay marayso hawlihii dhismaha Garoonka Diyaaradaha ee Buuhoodle.
Waqtiga shirku waa 20-01-2013
Saacada UK waa 5 pm
Somalia: 8 pm
Mineapolis 10 am
lambarka iyo access code ka soo waca telefoonada hoos ku qoran :
1. Guddoomiye, Abdullahi Daarood +447533219343 UK
2. Jama Mohamed +447507792349 UK
3. Amina Ahmed +447946791511
4. Omar Hagi Osman +447931704741
5. Kaariye (Boston USA) 857-2102035 USA
6. Saado Xaaji Maxamud tel.2074829051 USA
7. Faadumo Jaamac tel.4085440022 USA
OGEYSIIS MUHIM AH: SHIRKA WARBIXINTA HAWLAHA GAROONKA DIYAARADAHA EE BUUHOODLE
Waqtiga shirku waa 13-01-2013
WARBIXINTA HAWLAHA DHAMAYSTIRKA GAROONKA BUUHOODLE
Guddiga Dhismaha Garoonku waxay halkan idiinku soo gudbinayaa in ay soo dhawdahay dhamaystirkii Garoonka Diyaaradaha ee Buuhoodle, maadaama cagafcagafyadii ay soo dhaw yihiin oo dhawaan ay imanayaan, iyadoo xubno ka tirsan dadka ka soo jeeda deegaanka gobolka Cayn ay ugu deeqeen cagafcagafyadaas.
KA QAYBQAADO DHISMAHA GAROONKA DIYAARADAHA EE BUUHOODLE
Shir ay isugu yimaadeen 05.11.2012 xubnaha guddiga Dhismaha Garoonka diyaaradaha ee Buuhoodle waxay go’aamiyeen in shacab Soomaaliyeed loo soo gudbiyo sidii iyo meeshii iyo waqtigii ay soo shubi lahaayeen lacagta lagu taageerayo dhamaystirka Garoonka Buuhoodle.
Wajiga koowaad: waa in la uruuriyo dhaqaalaha lagu dhamaystiri lahaa Garoonka ilaa 16.12.2012.
Wajiga 2aad: in la bilaabo dhismaha RUNWAY ga 17.12.2012 lana dhameeyo haddii Alle idmo 17.02.2013.
Wajiga 3aad: Dhismaha xafiisyada iyo Tower ka oo iyana la bilaabayo 18.02.2012 lana dhamaynayo haddii Alle idmo 18.03.2013.
Wajiga 4aad: Waa xafladdii furitaanka Garoonka Caalamiga ah ee Buuhoodle ee dalka Soomaaliya, iyadoo albaabada iyo Runway ga la furayo 01.04.2013 Insha Allaah.
1. Waxaa account laga furay Xawaalada Amal Express, waxaad lacagta ku soo shubi kartaan cinwaankan:
2. Waxaa taageerayaasha Dhismaha Garoonka la ogeysiinayaa in maalinta Sabtida ee bishu tahay 10.11.2012 saacada UK 4pm uu jiro doono Insha Allaah shirweyne balaadhan oo looga hadli doono Garoonka iyo waxyaalaha ku hareeraysan. Waxaad kala xiriiri kartaan guddiyada qaabilsan Garoonka ee jooga magaaladiina, haddii aysan jirin la soo xiriir magacyada hoos ku qoran:
3. Walaalayaal waxaa Insha Allaah inoo qorshaysan in ugu dambayn Garoonka la furo 01.04.2013 inta ka horaysa waa in loo dhamaystiraa wax kasta oo Garoonku u baahan yahay, ha noqoto Runway ga, xafiisyada, qolalka martida sharafta leh (VIP) iyo waxyaalaha kale ee lagama maarmaanka ah oo dhan.
Wixii faahfaahin dheeraad ah kala soo xiriira:
Waxaanu kale oo halkan idiinku soo gudbinaynaa guddiga Garoonka ee Buuhoodle bayaankii lagu magacaabay riix halkan:http://www.waayaha.net/view.php?articleid=15229
Sawiro la qaaday mudadii la dhisay Garoonka halkan ka daawo: https://picasaweb.google.com/108778395513117455565/GaroonkaDiyaaradahaBuuhoodle
Guddiga Garoonka Diyaaradaha ee Buuhoodle
MAHADCELIN KU SOCOTA TAAGEERAYAASHA GAROONKA DIYAARADAHA EE BUUHOODLE
14.10.2012 (teleconference) Dhismaha Garoonka Diyaaradaha ee Buuhoodle
Ummad kasta waxaa horumarkeedu ku xidhan yahay sida dadkeedu u midaysan yahay iyo sida ay wax isaga maqlaan. Waxaa runtii noo cadaaday maalinta taariikhdu ahayd 14.10.2012 shirweynihii khadka telefoonka lagu qabtay ee ku saabsanaa sidii loo dhamaystiri lahaa Garoonka Caalamiga ah ee Buuhoodle in shacabwaynaha Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ka soo jeedaa deegamada Sool, Sanaag ito Cayn ee ka soo qaybgalay shirkaas ay aad iyo aad u xiisaynayeen in ay maqlaan horumarka Garoonka Diyaaradaha ee Buuhoodle.
OGEYSIIS SHIRKA GAROONKA DIYAARADA EE BUUHOODLE
Waxaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee horumarka jecel gaar ahaan dadka ka soo jeeda deegaamada Sool, Sanaag iyo Cayn la ogeysiinayaa
in ay ka soo qaybgalaan shir muhim ah oo looga hadli doono arrimaha Garoonka Diyaaradaha ee Buuhoodle oo dhanka teleconference ka oo la qaban doonoo
Axada 14.10.2012 saacada UK 5pm, Buhodle 7pm, Mineapolis 11am, Europe na 6pm.
GAROONKA DIYAARADAHA EE BUUHOODLE WAA SAXANYAHAY!!
Buuhoodle (06/10/2012) Wararka maanta naga soo gaadhay buuhoodle ayaa tibaaxaya in Injineer aad ugu takhasusay arrimaha garoomada diyaaradaha in uu yimid Buuhoodle, isagoo qiimeeyey dhawr arrimood oo kala ah: Continue reading →
Faa’iidooyinka Airport-ku leeyahay
Faa’iidooyinka Airport-ka Buuhoodle u leeyahay bulshada Soomaaliyeed.
Walaalayaal waxaan maqaalka ku eegaynaa sababta loo dhisayo airport caalamiga ah ee magaalada Buuhoodle. Continue reading →
Kulan balaadhan oo lagaga wada hadleyey dhamistirka Garoonka Buuhoodle(Daawo Videoga)
Waxaa maanta kulan balaadhan isugu yimid odayaasha, waxgaradka, iyo howlwadeenadaq magaalada Buuhoodle.